स म्भो गका लागि उत्तम समय कुन हो ? थाहा पाउनूस् – Kavrepati
Home / स्वास्थ्य / स म्भो गका लागि उत्तम समय कुन हो ? थाहा पाउनूस्
स म्भो गका लागि उत्तम समय कुन हो ? थाहा पाउनूस्
admin July 8, 2021	स्वास्थ्य Leaveacomment 259 Views
एक अध्ययनका अुनसार एक अध्ययनका अुनसारकार्यका लागि वर्षमा सबैभन्दा उत्तम समय जाडोयामको विदाको समय हो । त्यसैले अंग्रेजी महिना डिसेम्बरलाई स म्भो गका ला गि उत्तम महिना मानिन्छ । यो महिना आधा मंसिर र आधा पुष पर्दछ । यसर्थ, यो महिनामा जाडो निरन्तर बढिरहेको हुन्छ, विकसित राष्ट्रतिर यो महिनामा धेरै चाडपर्वहरु पर्दछन् र मानिसहरु स्वभाविकरुपमा उत्साहित र रमाइलो मुडमा हुन्छन् ।
क्रिसमस तथा नयाँ वर्षको अघिपछिका दिनहरु वर्षभरिमै स म्भो गका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय दिनहरु हुन् । स म्भो गका लागि वर्षको सबैभन्दा व्यस्त तेश्रो दिन भने भ्यालेन्टाइन डे हो । जब हप्ताको अन्त्यतिरका तिन दिन लगातार विदा पर्छ मानिसहरु बढि मात्रामा यौ’ न क्रि डा मा सं ल ग्न हुने अध्ययनले देखाएकाे छ ।
Previous मोडल तथा कलाकार निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा फेरि समस्या
Next हराएको तीन दिन पछि मृत फेला परेका साढे तीन वर्षीय बालकको आफ्नै दिदीले ह ‘त्या गरेको खुलासा